चितवन, २५ साउन । केही दिनयता थोरै मात्रामा संक्रमण देखिन थालेको चितवनमा आइतबारसम्म संकलित १५० भन्दा बढी स्वाबहरुको परीक्षण भएनन् । भरतपुर अस्पताल अन्तर्गतको कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला बन्द रहँदा कन्ट्‍याक्ट ट्रेसिङ र क्‍वारेन्टाइनमा भएका व्यक्तिहरुको रिपोर्ट प्राप्त हुन सकेन ।
यस विषयमा अस्पतालका प्रमुख नीतु अधिकारीले हप्ताको एकदिन प्रयोगशाला निर्मलीकरण गरिनुपर्ने भएकाले परीक्षण नभएको बताएकी छन् भने प्रयोगशालाका प्राविधिकहरुले प्रोत्साहन भत्ता नपाएका कारणले प्रयोगशाला बन्द गरेको स्रोतले बताएको छ ।
यस्तोमा कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट पर्खिरहेका धेरै व्यक्तिहरुको मानसिक अवस्थामा असर पुग्‍ने भन्दै चितवनका प्रजिअ नारायण भट्टराईले संकटका बेला अनेक कारण देखाउँदै प्रयोगशाला बन्द गराउने सबैलाई निश्कासन गरिने चेतावनी दिएका छन् ।
भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. श्रीराम तिवारीका अनुसार प्राविधिकले मात्रै नभएर अस्पतालका चिकित्सक र नर्सहरुले पनि प्रोत्साहन भत्ता पाएका छैनन् , तर उनीहरु कसैले काम भने नरोकेको बताए । मन्त्रालयसँग समवन्य गरिसकेको र भत्ता चाँडै उपलब्ध हुने उनको भनाई छ ।
सोमबारदेखि पनि ल्याब सुचारु नभए विकल्प खोजेर भएपनि ल्याब सुचारु गरिने डा. तिवारीले बताएका छन् । प्रजिअ भट्टराईले प्राविधिकतर्फ इंगित गर्दै आफू मात्र जान्‍ने सुन्‍ने हूँ र मेरो विकल्प अरु हुन सक्दैन भन्‍ने मानसिकता छ भने त्यो भ्रम मात्र हुने बताएका छन् । संसारमा हरेक कुराको विकल्प भएको बताउँदै उनले सोमबार साँझसम्म पनि रिपोर्ट नआए प्रशासन चुप लागेर नबस्‍ने चेतावनी दिएका हुन् ।